ZIKHUPHELELE FACETIME window PC 7, 8 & window 10 🤑
Yeqela esecaleni ephambili
Umxokozelo FaceTime For PC Window, IMac, Chromebook and iPad
Indlela yokukhuphela kunye nokusebenzisa ixesha elifanelekileyo kwiPC
Isilimela 12, 2020 yi Facetime Guide Shiya Comment
Hello Facetime Lover! Ngaba udidekile ngendlela ukufaka facetime kwi pc yakho Window ezifana Ixesha lendawo yeWindows 7, Ixesha lendawo yeWindows 8, okanye Nokuba ufuna ukukhuphela uze ufake facetime kwi window yakho 10 inkqubo yokusebenza ke ukulandela eli nqaku?
facetime for windows pc 10
ngaba facetime kwikhompyutha
Apha kweli nqaku, Ndiyinikele ezinye iingcebiso ezilula namacebo leyo eza kuvumela ukuba usebenzise app yakho oyithandayo facetime yemisebenzi eqongeni window.
Ukuba usebenzisa window laptop kwaye ufuna ukuba download facetime for windows 7 laptop ngoko yonke into nganye zagutyungelwa kweli nqaku silandela inkqubo elula onikelwa ngezantsi.
Facetime ngu Apple Inc. yenye kakhulu interactive, iluncedo, kunye nesoftware videotelephony yokugqibela enefuthe kwihlabathi liphela. Kweli xesha digital, wonke umntu ofuna ukuba uhlale uhlobene ekuhlaleni nabanye.
Ngoncedo kwexesha Face, ungenza umdla ukwenza zombini video and audio ubiza ukuhlala interactive indawo yakho. Ngokuhamba kwexesha, ukusetyenziswa FaceTime app liye kakhulu kwandile phakathi Apple abasebenzisi izixhobo.
Le app inokhuphiswano kwabanye njengoko kuvumela ukwenza le Osenyangweni-video quality and audio iminxeba. Ngokutsho uphando, abantu abaninzi ukuba Apple kuquka iPad, iPhone, IMac, kunye iPod usebenzisa FaceTime ukuba uqhagamshelane kunye nehlabathi zazo zobuqu kunye corporate.
ekuqaleni, Face Ixesha lwenzelwe kuphela Apple. Kodwa ngenxa yokusebenza kwayo kakuhle kunye nemfuneko, Ngoku unako kwakhona download FaceTime for PC. Ngaba loo umdla? Indlela yonxibelelwano itshintshe ngokupheleleyo ngoku.
Abantu bakhetha ukwenza ngakumbi yevidiyo nomsindo ubiza kunokuba e-mail okanye imeyili. Ngoncedo le app smart of Fact Time, ungakwazi lula ukuthetha okanye ubone umntu ehleli naphi na ehlabathini lonke.
Kwamanye amazwe ezifana US and UK, Abantu abaninzi basebenzisa izixhobo Apple leyo eyenza kube luncedo ukuba ahlale ihlanganiswe kunye nabanye Apple abasebenzisi izixhobo.
Kodwa kwamanye amazwe, abathengi ukhetha ukusebenzisa i PC kuba imisebenzi yabo yemihla ngemihla digital. Ngoko ukuzisa lula kubasebenzisi ezinjalo, eli nqaku liza kukhokela indlela yokusebenzisa nangokugqibeleleyo app iOS kwiikhompyutha zakho. Oku kwenza ukuba ukuxhuma kunye nabanye abantu abasebenzisa izixhobo ezahlukeneyo Apple.
Ngoko qhubeka ufunda eli nqaku ukuba ufuna ukulanda, ufake kwaye usebenzise i-app owabhala of Fact Ixesha kwi yakho Personal Computers.
1 Layisha ezantsi kwaye ufake Facetime App For PC:
2 Indlela ku Layisha ezantsi kwaye ufake FaceTime for PC?
2.1 iPadain wokulungisa indlela yesiphelo
2.2 Iimpawu FaceTime App kwi PC yakho:
2.3 Okungakumbi ukusuka kwindawo yam
Layisha ezantsi kwaye ufake Facetime App For PC:
ungalindela, Apple ine-app in-ezakhiwe FaceTime kuzo zonke izixhobo kuquka iPhones, iPod, iPads, and Mac. Kodwa awukwazi ukufumana olu khetho kwi PC yakho. Ngenxa yale njongo, kufuneka uzifake Face Ixesha ngokusebenzisa i email. Le nkqubo yokulanda luhambelana manyathelo alandelayo:
Okokuqala, kufuneka ukulanda iPadain wokulungisa indlela yesiphelo. Ungakufumana ngokusebenzisa ikhonkco enikwa: ipadian.net
Khuphela ixesha lePC
Emva ukulanda enomzami wokulungisa iPadian, evulekileyo fayile yawo kwaye ufake ngokuvumelana neemfuno anikwe kunye nemiyalelo.
ke, kanye enomzami wokulungisa indlela yakho iPadian ifakiwe, Ngoku ungenza ukuvula kwaye Ngema ngokunika ulwazi olufunekayo. Eli nyathelo idinga lakho Apple ID and password.
Ngoku unokuba app lwakho FaceTime. Kodwa mzekelo akasifumani ngoko ungakwazi ngokulula download kunye ngoncedo lwenkqubo Apple App Store.
Ekugcineni, ufake naliphi na zoqhagamshelwano Apple ihlabathi ngokusebenzisa email yayo, id yomsebenzisi okanye inombolo uze uqale ukwenza umsindo okanye wevidiyo. Ungenza oku ngokunqakraza ividiyo okanye icon lwemfonomfono enikwe kule app.
Indlela ku Layisha ezantsi kwaye ufake FaceTime for PC?
Enye indlela yokusebenzisa facetime kwi PC yakho kulandela amanyathelo ezimbalwa ezilula ngolu hlobo:
Facetime on PC kunokwenzeka emva kokuba uyilayishe ezantsi Bluestacks kwi yakho PC.
Ungakwazi ukukopisha ii-aplikeshini bluestacks ukusuka site esemthethweni bluestacks.com.
emva ukulanda Bluestacks, uyifake kwaye emva kokuba ukulanda ugqibezela, phinda Uqalele PC yakho.
Kuthatha imizuzwana embalwa ukuba yokubalisa emva kokuqala izicelo Bluestack. Musa ukunyanzelisa close, oko kunokubangela inkohlakalo software.
Yakuba le PC ukuqalelisa, evulekileyo bluestacks isicelo kwindlela yakho.
Yiya kwi menu kwaye nqakraza kwi isicelo ivenkile yokudlala.
Emva kokuvula i-Play Store, Nqakraza kwi nokukhangela uhlobo Ixesha lokujongana uze Umxokozelo facetime for windows pc.
Ukuze ufake i Facetime ngoko nangoko, cofa Vula okanye Sebenzisa, uze ulandele imiyalelo kwiskrini sakho. *Xa ucelwa ukuba igama umlawuli okanye isiqinisekiso, uchwetheze iphasiwedi okanye unikeze isiqinisekiso.
Ukuze ufake i FaceTime kamva, cofa Gcina, kwaye ke download ifayile ufakelo kwikhompyutha yakho. Xa sele ukulungele ukufaka i FaceTime, cofa kabini ngokukhawuleza ifayile, uze ulandele imiyalelo kwiskrini sakho. *Olu khetho ekhuselekileyo kuba unako Izakuvavanya ifayile wofakelo iintsholongwane phambi kokuba uqhubeke.
Ivule FaceTime kwi PC yakho.
iPadain wokulungisa indlela yesiphelo
Indlela Yokusebenzisa Face Ixesha kwi pc yakho?
Emva kokufaka yakho app oluthandayo Face Ixesha kwi PC yakho, kufuneka ulandele amanyathelo ezisisiseko ukuqala ukuyisebenzisa:
Emva ukhuphele uze ufake, ukuqalisa le app FaceTime. Ungenza oku ngokunqakraza kwi eneenkcukacha yayo kuphela.
Xa ukuqalisa le app okokuqala, Kufuneka ufake i id yakho yemeyile neenombolo zefowuni. Oku kunceda ukwenza ID yakho enokusetyenziswa ngabanye abasebenzisi qha wena. Ukuba sele unayo i ID, ungayisebenzisa ngenye ungenza entsha phakathi imizuzwana embalwa
Emva kokuba inkqubo yokungena, uya kufumana Access iimboniselo kwicala lasekhohlo lwe app lwakho FaceTime. Le panel ubandakanya uluhlu lwamagama abo bonke abantu nabo ofuna ukuzidibanisa.
Fumanisa umntu ofuna ukuqala incoko. Kwimeko usebenzisa FaceTime kwi PC, ungaqhagamshelana kuphela nawuphi na umntu ukuba uyazi iidilesi zabo email.
emva kwale, kufuneka ukuba ulinde iseshoni dial-up.
Kwaye ngoko xa omnye umsebenzisi uya pick ucingo lwakho, nonke ke kulindeleke ukuba arcade games yevidiyo okanye umnxeba audio.
Emva kokugqiba kwakho ingxoxo, unga nqakraza ngokulula kwi-Call Isiphelo iqhosha ukunqanda ifowuni.
Iimpawu FaceTime App kwi PC yakho:
Le app ephawulekayo videotelephony Iunoncedo ezininzi kwaye inika iziphumo ezibalaseleyo kubaxumi bayo. Ezinye iimpawu zayo umdla na:
Video High-Quality Call
yi kuphela Le app yenzelwe yevidiyo ubizo. Eyona nto ifundiswayo kukuba ukwenza abantu ukuqhagamshelana babe kufutshane ngoncedo kwezicelo yokuzonwabisa.
Le software yenzelwe ngononophelo ukuze ukwazi ukunandipha izisombululo ezikumgangatho ophezulu ngenxa wevidiyo. Iindaba ezimnandi Face Ixesha ngoku inkxaso 1080p kwi Personal Computers.
Ukuze sibe le, kwindlela yakho kufuneka babe ku-wakha iikhamera. Ukuba ngaba awunayo i-camera ngoko unako ukuthenga yewebhu.
I-Face Ixesha inikezela esibanzi 16:9 izinto. Oku kunika amava obalaseleyo ubizo xa ufuna ukuzidibanisa nabanye abasebenzisi.
Ngenxa umgangatho nokusebenza kwalo, le app ithathwa njengokuba okusemandleni xa kuthelekiswa kontanga yayo kuquka isithunywa, Skype, Google Duo ezininzi.
call Good audio:
Ukongeza awufani yevidiyo feature, Ungasebenzisa kwakhona ukusebenzisa iinketho call audio. Kwakhona unalo umgangatho isandi elungileyo kakhulu ngaphandle umgama
Umfanekiso in Picture Uphawu:
Oku kunceda ukuba ukukhangela ngcono ngokubonakalisa picture yakho encinane ecaleni ngoxa baxakeke umnxeba wakho.
Enye inzuzo lokhuphiswano FaceTime kwi PC yakho, ine- interface yomsebenzisi-friendly encomekayo. Kuyinto elula kangangokuba, smooth, kwaye kulula. Nabani na ukusebenzisa nokuqonda ngokufanelekileyo kakhulu. Esi sisizathu sokuba abasebenzisi uninzi ngokupheleleyo uthando kunye app FaceTime ngu Apple.
Kuba nemfihlo nokuphepha kwakho, yokuvimba nayiphi contact. Ukuba nabani na ndimyeke okanye bakucaphukisayo, konke onakho ukuyenza ukuvimba lowo mntu ngokungenisa igama lakhe block-kuluhlu ngu
Ukongeza kule, Face Ixesha inikezela nezinye iimpawu ezintle
• Unako lula ukufikelela kwi lwakho enqwenelwa nje ngokusebenzisa ID okanye yefowuni inombolo yabo Apple.
• Unako ukonwabela umnxeba iqela nge FaceTime. Okubangel 'umdla kukuba, le lokusebenza kukwenza ukuba uxhumane ukuya ku 32 abasebenzisi ndawonye
• Ukuze bulisa nencoko interactive, ungasebenzisa vitana Animoji
• Ngexesha wevidiyo, unako ukusebenzisa iikhamera zakho ngeendlela ezimbini
Uyakwazi ubabonise ubuso bakho ngokusebenzisa ikhamera phambi PC okanye
Ungasebenzisa umva ikhamera ukuba abahlobo bakho abalapho bazibone izinto ukubukela
• Ukuze ufumane uqhagamshelana nabo ubathandayo ngokukhawuleza, ungenza uluhlu lwakho ziThandwyo.
• Unako enjoy Face Ixesha yi nokuba WI-Fi okanye uqhagamshelwano yakho data
• Ungasebenzisa le app ngeelwimi ezahlukeneyo ngokuxhomekeke phezu kukhetho lwakho
Ndiyathemba ukuba nqaku sele sazaliseka zonke iinkcukacha kufuneka usebenzise facetime kwi PC yakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, musa Sho kwibhokisi izimvo. Ndiya kukuphendula umbuzo wakho kunye nokusombulula imibuzo yakho.
Okungakumbi ukusuka kwindawo yam
Indlela yokukhuphela iFaceTime yeeWindows
download & Sebenzisa ubuchule kwiKhompyuter
Indlela elula yokukhuphela kunye nokuFaka uBuso kwi-i-Pad
Uyifaka njani kwaye uyisebenzisa njani indawo ekuyo kwiMac
Indlela elula yokusebenzisa iFaceTime kwiApple Watch
Jonga uSkype ngokuthelekiswa neXesha lokuQala 2020
sifakwe phantsi: umxokozelo Facetime
Ibar esecaleni Primary
Phendla isayithi ...
Indlela Sebenzisa Apple Watch Ngaphandle Ukumatanisa ku iPhone
copyright © 2020 · Magazine Pro on Genesis Framework · WordPress · Ngema
Le website usebenzisa ikuki ukuphucula amava akho. Siza sizakucinga ukuba Kulungile ukuba nale, kodwa unako yokuphuma ukuba unqwenela. Useto CookiesWAMKELE
Laveka Soloko Kunikwe
cookies kuyimfuneko abaluleke kakhulu kule website ukuze usebenze kakuhle. Olu didi lubandakanya kuphela cookies eqinisekisa ukuba imisebenzi esisiseko kunye neempawu nokhuseleko website. Ezi cookies musani ukugcina nayiphi na inkcazelo yobuqu.
Nayiphi cookies ukuze singabi ngokukodwa yimfuneko website kumsebenzi kwaye isetyenziswa ngokukhethekileyo umsebenzisi Qokelela iinkcukacha zakho nge nokuhlaziya, iintengiso, neminye imixholo eveze zibizwa njenge cookies non-kuyimfuneko. Kunyanzelekile ukuba imvume yomsebenzisi nokufumana phambi ukubaleka ezi cookies kwi website yakho.